China mihodina haingana prototype volamena plating PCB miaraka amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy lavaka Counter | Kangna
mihodina haingana prototype volamena plating PCB miaraka amin'ny lavaka milentika Counter
Karazana fitaovana: FR4
Isa isa: 4
Min ny sakany / habaka: 6 mil
Min kely habe: 0.30mm
Ny hatevin'ny birao vita: 1.20mm
Vina matevina vita: 35um
Loko saron-tava solder: maitso “
Fotoana fitarihana: 3-4 andro
Loko sarontava: maintso ''
Ny dingana prototyping no fotoana manakiana indrindra amin'ny programa fikarohana sy fampandrosoana.
Mba hanafohezana ny fotoam-pikarohana sy ny fampandrosoana dia mila ny mpanamboatra PCB hamokatra prototype haingana kokoa ianao.
Avy eo nipoitra ny prototype fihodinana haingana.
Ho an'ny fanamboarana PCB, Kangna dia manana ny traikefa amin'ny fanamboarana PCB mandritra ny 14 taona mahery (hatramin'ny 2006). Ny fisafidianana antsika dia tsy vitan'ny hoe hanafoana ny fotoana famokarana PCB fa mampihena ny vidiny sy hahazoana ireo tabilao avo lenta ihany koa. Afaka manome anao prototype avo lenta ianao miaraka amin'ny fotoana famokarana fohy indrindra amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Raha ny mahazatra, raha latsaky ny 0,1 metatra toradroa ny velaran'ny totalin'ny PCB misy anao dia raisinay ho toy ny prototype.
Tsy misy MOQ voafetra, na dia manafatra PCS iray aza ianao, dia hanaiky ny baiko am-pitandremana izahay.
Ny fotoana fitarihana ara-dalàna dia 5 andro ho an'ny tabilao tokana sy roa sosona, 7 andro ho an'ny 4 sosona, 9 andro ho an'ny 6 sosona, 10 andro ho an'ny 8 sosona, 12 andro ho an'ny tabilao 10 sosona.
Ho an'ny prototype haingana dia vitantsika ny famitana ny prototype an'ny tabilao tokana sy roa sosona ao anatin'ny iray andro na roa andro, 3-4 andro ho an'ny 4 layer, 4-5 andro ho an'ny 6 layer, 5-6 andro ho an'ny 8 layer, 6 -7 andro mandritra ny tabilao miisa 10.
Arakaraka ny maha-kely ny andro fiasana no lafo kokoa ny vidiny.
Aorian'ny fanekena ny kaomandinao dia hamerina handinika ireo rakitra Gerber anao ny injenierantsika mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fahaizanay teknika izany. Raha vantany vao mandalo ny fanaraha-maso ireo rakitra dia afaka mandoa ny vidiny ianao. Avy eo ny injenieranay dia hijery indray ary manatsara ny fisie mba hamokarana. Indraindray dia hisy ny fanontaniana momba ny injeniera.
Mba hamaranana ara-potoana ny famokarana dia mila mamaly ara-potoana haingana ireo fanontaniana momba ny injeniera avy amin'ny injenierinay ianao.
Ny fotoana laniana amin'ny fanontaniana momba ny injeniera dia tsy isaina ho toy ny fotoam-pamokarana.
Raha manafatra ianao aorian'ny P5.00 ny fotoana sinoa dia isaina ny ampitso aorian'ny ampitso.
Previous: Assembly an'ny PCB SMT ambany
birao fananganana keramika vita amin'ny volamena mitokana tokana
Assembly an'ny PCB SMT ambany
Saron-tava solder 3 ans mametaka volo varahina ENEPIG ...
1.6mm haingana prototype fenitra FR4 PCB
Resin plugging loaka Microvia fanitrihana volafotsy H ...
6 sosona impedance fanaraha-maso board henjana-flex amin'ny ...